Adeegyada - Ururka Daryeelka Bulshada Adeegyada - Ururka Daryeelka Bulshada
Gurigaaga Caafimaadka ee Bukaan-socodka
Waxaannu aqbalnaa bukaan kasta dhaqankiisa gaarka ah, baahiyaha daryeelka caafimaadka, iyo qiyamka, waxaanan ku dhiirigelinaa inay sameeyaan doorashooyin caafimaad leh oo hurinaya wanaaggooda iyo wanaagga kuwa kale.
Daryeelka loo dhan yahay
Kooxdayada daryeelka loo wada dhan yahay waxay la yimaaddaan bulshadeena iyagoo wata khibradahooda gaarka ah iyo dhaqamo kala duwan.
Waxaan aaminsanahay caafimaadka oo dhan, bixinta daryeelka caafimaadka qoyska aasaasiga ah, daryeelka ilkaha, caafimaadka dabeecadda, iyo taageerada bulshada. Kooxdaada daryeelka waxa loo qorsheeyay inay kula shuraakoobaan si ay u daboolaan baahiyahaaga daryeel caafimaad ee gaarka ah iyagoo isku daraya jidhka, maskaxda, iyo wadnaha.
Daryeelka Isku Duwan
Ujeedada Kooxda Daryeelkaaga waa inay ogaadaan oo fahmaan taariikhdaada caafimaad, diiradda saaraan daryeelkaaga, iyo xoojinta wanaaggaaga. Tani waxay ka dhigan tahay in kooxdaada oo dhami ay ku daryeelayaan, ka jawaabayaan su'aalahaaga, oo ay kugu xirayaan ilaha.
Bukaan-socodka waxay wici karaan Care Community Care saacadaha furan iyagoo waci kara mid ka mid ah goobahayaga. Saacadaha furan ka dib, bukaanadu waxay la hadli karaan bixiyaha la soo wacay kaasoo ka caawin kara baahi kasta oo caafimaad oo degdeg ah. Bukaanku waxa kale oo ay kula xidhi karaan Kooxdooda Daryeelka wakhti kasta iyaga oo sii mara marinka bukaanka.
Tayada iyo Badbaadada
Daryeelka caafimaadka ee tayada leh waa xaq, maahan mudnaan. Ahmiyadeenu waa inaan wax ka qabanno, cabirno, kana jawaabno dhammaan khibradaha bukaanka. Fadlan u soo dir email tayo leh.compliance@unioncomcare.org haddii aad jeclaan lahayd inaad na siiso hadiyadda jawaab celinta.